भेजा फ्राई’ की नायिकाले डान्सिङ अंकललाई जोकर भनेपछि डान्सिङ अंकलका प्रशंसकहरुले यसरी गरे हमला
Posted: 2018-06-08 14:47:11
संजीव श्रीवास्तवले गोबिन्दाको फिल्मको गीत ‘आपके आ जाने से’ मा सालीको विवाहका डान्स गरेका थिए । सालीको विवाहमा डान्स गरेर इन्टरनेट सनसनी बने यी प्राध्यापक (भिडियोसहित) सोसल मिडियामा निकै भाइरल भइरहेको छ । आफ्नो डान्सका कारण रातारात चर्चित बनेका संजिवलाई बलिउड सेलिब्रिटीले पनि प्रशंसा गरिरहेका छन् । तर यसैबीच एक नायिकाले उनलाई ‘भेजा फ्राई’ की नायिका भैरवी गोस्वामीले ट्वीटरमा लेखेकी छिन , ‘अर्को भिडियो सुट संजीव श्रीवास्तवको हो, मानिसको मागमा । भारतका अडियन्सलाई लो क्लास कन्टेन्टमात्र हेर्न मनपर्छ । भारतीयले यी जोकरलाई स्टार बनाइदिएका छन् ।
उनको उक्त कमेन्टपश्चात् संजीवका प्रशंसकले उनलाई ट्रोल गर्न थालिहाले । एक प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘माफ गर्नुहोस् म्याडम तर मैले तपाईंबाट यस्तो आशा गरेको थिइनँ । यदि तपाईं केही भिन्न गरिरहनु भएको छ भने त्यो लो क्लास र जोकर भयो ? अत्यन्तै खराब शब्दको चयन गर्नुभएको छ तपाईंले ।’जोकर बताएकी छिन् । डान्सिङ अंकलका प्रशंसकलाई यसबारे थाहा भएपछि उनीहरुले नायिकाको निकै आलोचना गरेका छन् ।
अर्का सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘के तपाईंले आफ्नो पोष्टमा आएको कमेन्ट हेर्नुभयो ? तपाईंको कुरामा कोही पनि सहमत छैनन् ।’ अर्काले लेखे, ‘हाई क्लास, मानिसहरु उनको डान्स हेरेर मनोरञ्जन लिइरहेका छन् । तपाईं कृपया आफ्नो क्लास मेन्टेन गर्नुहोस् । तिमी पनि यसरी नै भाइरल हुन चाहन्छौ तर तिमीसँग कुनै ट्यालेन्ट नै छैन ।’
प्राध्यापकको भाइरल डान्स हेरेपछि गोबिन्दाले दिए यस्तो प्रतिक्रिय एक अन्य प्रयोगकर्ताले लेखे, एक जोकरले आफ्नो डान्सिङ स्टाइलले रातारात सबैको मन जिते । तपाईंले सबैकुरा देखाउनुभयो तर फेल हुनुभयो ।